ငပုတောမြစ်တစ်ရာ သစ်တောကြိုးဝိုင်း အတွင်းမှ ဆင်ပစ် တူမီးသေနတ် တစ်လက်နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျာ? - Yangon Media Group
ငပုတောမြစ်တစ်ရာ သစ်တောကြိုးဝိုင်း အတွင်းမှ ဆင်ပစ် တူမီးသေနတ် တစ်လက်နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျာ?
ပုသိမ်၊ ဇွန် ၁၈
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးငပုတောမြို့နယ် မြစ်တစ်ရာသစ်တောကြိုးဝိုင်းအကွက် ၂ဝ၅ ဒေသအခေါ်နှာပြတ်တောင်ကုန်းရှိ သစ်ပုပ်ပင်အောက်တွင် ဝှက်ထားသော ဆင်သတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် တူမီးသေနတ်တစ် လက်နှင့်အတူ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား ဇွန် ၁၈ ရက်နံနက် ၁ဝ နာရီ ကျော်ခန့်က ပိုင်ရှင်မဲ့တွေ့ရှိကာ သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း ငပုတောမြို့ နယ် တင်းချောင်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ် ရေးရုံးမှ သိရသည်။
တောဆင်ရိုင်းများ သတ် ဖြတ်ခံရမှုကာကွယ်ရေးနှင့် ဆင်သတ်မုဆိုးများ ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ငရုတ်ကောင်းတောင်၊ ငရုတ် ကောင်းအခြေစိုက်စခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ သစ်တောရဲ၊ တောဆင်ရိုင်းထိန်းသိမ်းရေးမိတ်ဆွေများအဖွဲ့နှင့် တင်းချောင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်နေစဉ် ယင်းနေရာသို့အရောက်၌ တွေ့ ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”သစ်ပုပ်ပင်အောက်မှာ ပလတ် စတစ်အိတ်နဲ့ပတ်ပြီး ဝှက်ထားတဲ့ အရှည်လေးပေလောက်ရှိတဲ့ဆင် ပစ်တူးမီးသေနတ်ရယ်၊ ဘူးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ ခဲသီး ၄ဝ ကျော်ရယ်အခြား ဆက်စပ်ပစ္စည်းသုံးမျိုးကို ပိုင်ရှင်မဲ့ တွေ့တာ”ဟု တင်းချောင်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်မြင့်ထွန်းကပြောကြားသည်။ သိမ်းဆည်းရမိသော တူမီး သေနတ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အား ငရုတ်ကောင်းနယ်မြေရဲ စခန်းသို့ ပေးပို့လွှဲပြောင်းအပ်နှံရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း တောဆင်ရိုင်းများသတ်ဖြတ်မှုမခံ ရေးနှင့် ဆင်သတ်မုဆိုးများဖမ်းဆီး ရမိရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် တောင်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီများ ဒေါ်လာ ၇၂ ဘီလီယံဖ
လွှတ်တော်တွင် အစိုးရမှပေးခဲ့သည့် ကတိကဝတ် အချို့ အကောင်အထည်ဖော်မှု အားနည်းလျက်ရှိဟု လွှတ်တော??
‘လင်္ကာဒီပချစ်သူ’ စင်တင်ပြဇာတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန် မသုံးသပ်ချင်တော့ဟု စာရေးဆရာ ချစ်ဦးညိုေ